ऐतिहासिक कदम, जसले वाचा पुरा गरे - साक्षी खबर ऐतिहासिक कदम, जसले वाचा पुरा गरे - साक्षी खबर
असोज २१, २०७७ | ५२८ पटक पढिएको
नेपालको संविधान २०७२ ले प्रदेशको स्थायी राजधानी र नामाङ्कन सम्बन्धमा प्रदेश सभाको दुई तिहाइ मत अनिवार्य भनेको छ । प्रदेश नम्बर पाँचको स्थायी मुकाम राप्ती गाउँपालिका, गढवा गाउँपालिका र अर्घाखाँचीको शित गङ्गा नगरपालिकाको मध्यबिन्दु केन्द्रमा भारी मतले पारित गरिएको छ । निर्वाचनताका खास गरी नेकपाका नेताद्वय कृष्णबहादुर महरा र प्रदेश नम्बर पाँचका मुख्यमन्त्रीका तत्कालीन प्रत्यासी शंकर पोखरेलले स्थायी मुकाम दाङ ल्याउने प्रतिबद्धता व्यक्त गर्नुभएको थियो । यो विषयमा आफू मुख्यमन्त्री भएपछि शंकर पोखरेलले कहिल्यै पनि यही जिल्लामै प्रदेशको मुकाम तोकिन्छ भन्दै भाषण गर्नुभएन । जुन कुरालाई कतिपय व्यक्तिहरुले मुख्यमन्त्रीसँग प्रदेशको राजधानी साटेको आरोप समेत लगाउन भ्याए तर यर्थाथ फरक थियो ।
मुख्यमन्त्रीको सधै एउटै धारणा थियो प्रदेश मुकाम भर्जिनल्याण्डमै हुनेछ । मुख्यमन्त्री शंकर पोखरेलको नाम इतिहासको पानामा सुनौला अक्षरले लेखिनेछ । यतिबेला प्रदेश नम्बर पाँच प्रदेशको स्थायी राजधानीको विषयमा तातिएको छ । अस्थायी राजधानी बुटवलका जनताहरु राजधानी अन्यत्र सार्न थालिएको विरोधमा आन्दोलित भएका छन् भने ससंदमा सांसदहरु कुर्सी तोडफोडका कार्य समेत गर्न थालेका छन् । पहिलो कुरा त हाम्रा नेतागणहरु प्रदेशको राजधानीलाई चुनावी प्रतिष्ठासँग जोडेर जनतामा ठुलो सपना बाडे जुन सपना नेताहरुका लागि निल्नु न ओकल्नु भएको छ ।
कम्तिमा चुनावी एजेण्डा प्रदेशले के कस्ता अधिकार दिने र जनताको घर दैलोमा के कसरी पु¥याउने सन्दर्भमा हुनुपर्ने त्यसो देखिएन । राजधानी हुँदैमा सम्पूर्ण कुराको विकास हुँदैन भन्ने तथ्य, प्रमाण हामीले कतै जनतासामु बुझाउन सकेनौ कि ? संघीय राजधानीकै सवालमा हेर्ने हो भने काठमाडौभन्दा अन्यत्र विकास नै भएको छैन त ? पक्कै पनि काठमाडौभन्दा धेरै सुन्दर शहरकारुपमा पोखरालाई लिन सकिन्छ । साँच्चिकै प्रदेश राजधानी भएकै कारण बुटवलका जनता खुसी छन् त ? एक पटक काम विशेषले बुटवलमा पुग्दा एक होटेलमा खाने खाने समयमा त्यस होटेलका सञ्चालकसँग ३० मिनेट जति कुराकानी गर्ने मौका मिलेको थियो । उहाँ भन्दै हुनुहुन्थ्यो बाबु प्रदेश राजधानी भएर यहाँको सडक चौपट्टै भयो । आफूलाई कहिले छिट्टै पुग्नु पर्ने काम हुन्छ गाडी जाम भएर हैरानी खेप्नु परेको छ । राजधानी भएर केही ठुला होटेलहरुका लागि त फाइदा पुगेकै होला तर खासमा हामी जस्ता स–साना व्यापारीहरुलाई त सास्ती मात्रै भोग्नुपरेको छ । यो प्रदेशको राजधानी कहिले सर्ला भन्ने भएको छ बाबू भन्दै हुनुहुन्थ्यो ।
यति दृष्टान्त मैले किन प्रस्तुत गर्न खोजिरहेको छु भने त्यो तल्लो वर्ग जुन गरिखाने वर्ग हो, त्यहाँसम्म त प्रदेशको मुकामले कुनै प्रभाव पारेको रहेनछ । प्रदेशको राजधानी सरगर्मीका समयमा खासगरी बुटवल क्षेत्रका सांसद, आफूलाई बुद्धिजीवी ठान्ने वर्गका कुरा सुने र अचम्म लाग्यो । उहाँहरु भन्दै हुनुहुन्थ्यो यहाँ पर्याप्त भौतिक पूर्वाधार छ, अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल छ । उहाँहरुका यी यावत् तर्क सुनिदै थियो । भैरहवा विमानस्थलको लम्बाई तीन हजार मिटर छ । हामीले त्यति फूइयाँ लगाउँदै गर्दा दाङमा सर्वे प्रक्रिया अघि बढाइएको पाँच हजार मिटर लम्बाईको विमानस्थललाई के स्थानीय विमानस्थल भन्ने । भैरहवादेखि नेपाल भारतको सीमाना कति दुरीमा पर्छ यस कुराको हेक्का राख्ने वा नराख्ने । भन्नुको तात्पर्य दाङ जिल्ला पनि हरेक कुराले अघि बढिरहेको देखिन्छ ।
प्रदेशको राजधानीका लागि पूर्वाधार निर्माणका लागि पर्याप्त जग्गा जमिन, खानेपानी, आवश्यक कच्चा पदार्थ पनि पर्याप्त मात्रामै छ । दाङले राजधानी मागेको हैन राजधानीले दाङ खाजेको हो । सुरक्षाका दृष्टिकोणले पनि दाङ देउखुरी उत्तिकै महत्वपूर्ण मानिन्छ ।
प्रदेशको राजधानीका लागि पूर्वाधार निर्माणका लागि पर्याप्त जग्गा जमिन, खानेपानी, आवश्यक कच्चा पदार्थ पनि पर्याप्त मात्रामै छ । दाङले राजधानी मागेको हैन राजधानीले दाङ खाजेको हो । सुरक्षाका दृष्टिकोणले पनि दाङ देउखुरी उत्तिकै महत्वपूर्ण मानिन्छ । बुटवल सुरक्षाका सवालमा पनि विगतमा त्यस्ता उदाहरणहरु तथ्य छन् कि सीमाना नजिक भएका कारण हत्या, हिंसाका घटना घटेका । एउटा राजधानी सुरक्षाका दृष्टिकोणले पनि सही क्षेत्रमा निर्धारण गरिएको हुनुपर्छ । जसरी हाम्रा मुख्यमन्त्रीको एउटै धारणा रह्यो, प्रदेश राजधानी सन्दर्भमा हामी भर्जिनल्याण्डमा राजधानी बनाउँछौ । त्यो भर्जिन ल्याण्ड यस्तो होस् हरेक कुरा अन्यत्रबाट ल्याउनु नपरोस् । अर्घाखाँची, प्यूठान र दाङको संगमस्थल हो । बर्दियाले आज प्रदेश नम्बर ६ मा गाभिने कुरा गर्दै गर्दा वा बाँके पनि त्यता जाने विचार बनाउँदै गर्दा भालुवाङमा आउनु न्यायोचित होइन र ? खासगरी शहरी क्षेत्रमा जन घनत्व बढ्दै गयो भनेर नेपाल सरकारले पहाडी क्षेत्रमा समेत नयाँ शहरी क्षेत्रको अवधारणा लिई, मदन भण्डारी राजमार्ग, मध्यपहाडी लोकमार्गको काम अघि बढाइरहेको सन्दर्भमा भर्जिनल्याण्डमा प्रदेशको मुकाम तोकिने त्यसैको एउटा उदाहरण पक्कै होला ।
अनि पूर्व पश्चिम राजमार्ग छँदैछ नि खर्च बढाउने अर्को राजमार्ग किन चाहियो भन्ने प्रश्न कहिले उठेको छ ? संघीयताको मर्म के हो ? जहाँ जनताहरु छन् त्यही सेवा पाउन भन्ने होइन । प्रदेश नम्बर पाँचका जिल्लाहरु बर्दियाले पनि न्यायको अनुभव गर्न पाओस् रुकुम पूर्वदेखि नवलपरासी पश्चिमसम्मका जनताहरुले अपनत्व गर्न सकून् । पाल्पादेखि रोल्पासम्मले न्यायको मार्गमा हिडेको अनुभव गर्न पाओस् भन्ने कुरा पनि प्राथमिकता मै होला । दाङ भालुवाङ क्षेत्रमा प्रदेशको मुकाम तोकिदै गर्दा रुपन्देही अर्थात् बुटवल क्षेत्रले अन्यायको अनुभूति गर्न नपाओस् । त्यहाँ पनि प्रदेश सरकारले अघि सारेकै छ । त्यो क्षेत्र आर्थिक क्षेत्रको मुकाम बन्न सक्छ । एउटा प्रशासनिक मुकाम अर्को आर्थिक मुकाम दुवै बिना एक अर्का अस्तित्वमा रहन सक्दैनन् ।
सिमेन्टका क्रंक्रिट ठडिदैमा त्यो ठाउँ सर्व सम्पन्न भैहाल्न भन्नु कहाँसम्मको न्यायोचित धारणा हो । पक्कै पनि ती क्रंक्रिटहरु फेरि ठडिन सक्छन् । हामी जंगल काटेर विनास गरेर मुकाम बनाउने कार्यमा सहमति जाहेर गर्न सक्दैनौ । दाङ त्यस्तो भूमि हो जहाँका जनमनहरु सयौ बिगाहा जग्गा एउटा शिक्षालयलाई, अस्पतालयलाई दान गर्न सक्ने मनकारीहरुको जिल्ला पनि हो भने मुकामका लागि पनि पक्कै दिनेछन् । एउटा औद्योगिक क्षेत्र निर्माणका लागि त हजार बिगाहा जग्गा दान गर्न सक्ने ल्याकत दाङले राख्न सक्छ भने मुकामका लागि पनि पक्कै सक्नेछ । त्यहाँ मुकाम रहनेछ । जहाँ बिचमा राप्ती नदी अटलरुपमा बगिरहनेछिन । हामी मुकामलाई नदीको छेउबाट पक्कै विस्थापित गरेका छैनौ । हिजो तिनाउको समीपमा अस्थायी मुकाम थियो भने आज राप्तीको समीपमा मुकाम रहनेछ । हिजो केवल बुटवलका क्षेत्रका मानिसहरुको उत्पादनले मात्रै मुकाम बाचेको थियो भने आज रोल्पा, प्यूठान, अर्घाखाँची र दाङको उत्पादनले त्यो मुकामलाई थप हराभरा तुल्याउनेछ । त्यहाँका जनताहरुले उत्पादन गरेका वस्तुहरुको बजारीकरणमा टेवा पुग्नेछ । हिजो लुम्बिनी केवल ६ जिल्लामा सीमिति थियो भने आज वृहत्तरआकारमा १२ जिल्लामा पुगेको छ । दुनियामा यस्तो रहने चिची पनि पापा पनि त्यो क्षेत्रलाई पनि न्यायोचित भएकै छ । पापा लुम्बिनी प्रदेश चिची भालुवाङ मुकाम भएन । लोकतन्त्रको सुन्दर पक्ष भनेको सबैलाई समान सहभागिता, समान अपनत्व होइन र ? त्यस क्षेत्रका बासिन्दाहरुलाई अन्यायोचित पक्कै भएको छैन । हाम्रा पिँढीले पक्कै हामी माथि गर्व गर्नेछन् । साँच्चिकै हाम्रा पुर्खा महान रहेछन् । यति सुन्दर भूमिमा मुकाम स्थापना गरिदिए । पक्कै पनि प्रदेशको मुकाम दाङ देउखुरी उपत्यका भालुवाङ क्षेत्रमा हुँदैमा आज आन्दोलन गरिरहेको क्षेत्रलाई पक्कै पनि अन्याय हुने छैन ।
भौतिक दुरीका दृष्टिकोणले दाङको बबई गाउँपालिकाको पश्चिमी क्षेत्रबाट भन्दा बुटवलबाट भालुवाङ नजिक पर्छ अनि । त्यो बबईले फूलमाला र दियो बाल्दै गर्दा तपाईहरु आगो बाल्दै हुनुहुन्छ । हिजो अस्थायी मुकाम हुँदा त्यस क्षेत्रका नेतागण बालकृष्ण खांण, विष्णु पौडेलमाथि दाङका जनताहरुले कहिल्यै ढुङ्गा बर्साएनन् बरु फूलमालाले स्वागत गर्न पुगे आज त्यहाँका जनताहरु रिसको आवगेमा भौतिकरुपमै आक्रमणमा होमिनुभएको छ । हामी चाहान्छौ तपाईहरु जसले ढुङ्गा बर्साउनुभयो तपाईहरुलाई हामी फूलमाला गुच्छाले स्वागत गर्नेछौ । तपाई मुकाम आउँदा बखत । त्यस कारण प्रदेश मुकाम भालुवाङ नगरीमा तपाईहरुलाई स्वागत गर्न, फूलमालाले सम्मान गर्न यी मनहरु आतुर छन् जसले राज्यको सम्पत्ति कुर्सी फ्याकेर तमासा देखाउनुभएका सांसदहरुलाई समेत विशेष सम्मान गर्नेछौ । पक्कै पनि त्यो चिसो हावाले तपाईको रिस, आवगेको मस्तिष्कलाई केही हदसम्म चिसो बनाउनेछ ।